कोभिड-१९ कहाँबाट सुरू भएको ? अमेरिकाबाट सुरू भएको शंकालाई प्रमाणित गर्ने सुविधा – Online Annapurna
कोभिड-१९ कहाँबाट सुरू भएको ? अमेरिकाबाट सुरू भएको शंकालाई प्रमाणित गर्ने सुविधा
३ चैत्र २०७६, सोमबार ०९:२९ March 16, 2020 101 Views
अनलाईनअन्नपूर्ण/पोखरा, चैत्र ३
अमेरिकी कांग्रेसको प्रतिनिधि सभाद्वारा आयोजित कोभिड-१९ महामारीको सुनुवाई सम्मेलनमा सांसद हार्ली रोडाले यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो- फ्लूबाट केही अमेरिकीहरूको मृत्यु भयो। तर वास्तवमा यी अमेरिकीहरू कोभिड-१९ संक्रमित भएर मर्ने सम्भावना थियो कि थिएन? अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा प्रतिरोध अर्थात् सीडीसीका प्रमुख रोबर्ट रेडफिल्डले हाल त्यस्तो अवस्था रहेको जवाफ दिनुभयो।
यो सूचनाले ज्यादै ध्यानाकर्षण गरेको छ। यो जवाफबाट अमेरिकामा कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीको मृत्युलाई फ्लूको गलत निदान भएको पुष्टि गरिएको छ। जसले कोभिड-१९ अमेरिकाबाट सुरू भएको शंकालाई प्रमाणित गर्ने सुविधा दिएको छ।
हामी समयरेखाको समीक्षा गरौः सन् २०१९ सेप्टम्बरदेखि अमेरिकामा फ्लू सुरू भयो। अक्टोबरमा सातौं विश्व सैन्य खेलकुदमा भाग लिन अमेरिकी सैन्य खेलाडीहरू वुहान आएका थिए। सो अवधिमा केही विदेशी खेलाडीमा संक्रामक रोग लागेको थियो। अमेरिकाले फ्लूबाट मर्नेहरूमध्ये कोभिड-१९ संक्रमित बिरामी समेटिएको स्वीकार गरेका हुनाले यो भाइरस अमेरिकाबाट सुरू भएको बाहिरी शंका तार्किक देखिन्छ।
केही समयअघि क्यानडाको थिंक ट्यांक “ग्लोबल रिसर्च”मा प्रकाशित लेखले चिनियाँ थाइवानी भाइरस विशेषज्ञको विश्लेषण उद्धृत गरेको छ। ती भाइरस विशेषज्ञका अनुसार, इरान तथा इटालीले स्थानीय भाइरसको जीन समूह सार्वजनिक गरेका छन्। ती जीन समूह चिनियाँ भाइरसको जीनभन्दा फरक छ। त्यसैले त्यहाँको भाइरस चीनबाट आएको होइन।
जनवरी २४ तारिख “लान्सेट”मा प्रकाशित एउटा शोधपत्रका अनुसार, प्रारम्भमा उपचार लिने ४१जना कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीहरूमध्ये १३जनाले ह्वानान समुद्री खाद्य बजारसँग सम्पर्क गरेका थिएनन्। जनवरी २६ तारिख पत्रिका “विज्ञान” मा “सम्भावित रूपमा वुहानस्थित ह्वानान समुद्री खाद्य बजार कोभिड-१९ भाइरसको जन्मस्थान होइन” शीर्षकको लेख प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा १३ जना र उक्त बजारबीच कुनै सम्बन्ध नभएका हुनाले नयाँ कोरोना भाइरसको प्रारम्भिक स्रोत अरू कुनै क्षेत्र हुनसक्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी जर्ज टाउन विश्वविद्यालयका संक्रमण रोग विशेषज्ञ ड्यानिएल लुसेयको धारणा लेखिएको छ।
हाल विश्वमा महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य केन्द्रिय अवधिमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकाले विज्ञानको भावनाको आधारमा कोभिड-१९ कहिले तथा कहाँ सुरू भएको भनेर व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ। यो अमेरिकी सर्वसाधारणको जीवनका लागि जिम्मेवारीवोध हुनु मात्र होइन, भाइरसको प्रसारको नियन्त्रण तथा विश्व स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक कदम पनि हो।
अमेरिकाले महामारीको राम्रोसँग रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्दा भाइरसको स्रोतलाई स्पष्ट पारेर बाहिरी शंकाको जवाफ दिने आशा गरिएको छ।श्रोत :सिआरआइ डट सिएन